Raveloson Constant ”Mihodina ny tantara !” - rov@higa
Raveloson Constant ”Mihodina ny tantara !”
9 Septembre 2011, 23:38pm
Ny fanamby napetratsika indray no nindramin’ny FAT sasantsasany fa hoe : hilatsaka an-dalambe ny vahoaka raha tsy atao alohan’ny 17 septambra ilay sonia, hoy Raveloson Constant tetsy amin’ny Magro Behoririka omaly alarobia 8 septambra.
Nilaza teto ny mpitari-tolontsika ary nivoaka an-gazety izany fa efa mihodina ny tantara, ary efa hatrany Gaborone io, hoy izy. Notsiahiviny ny fanambarana nataon’i Andry Rajoelina tamin’ny aprily nilaza fa tsy handeha tany Gaborone raha tsy sonia sisa no atao kanefa dia lasa ihany avy eo. Mafy ilay miandrandra fankatoavana iraisam-pirenena, hoy i Constant. Miverina indray ny resaka raha avy namory ireo mpanao politika akamany tao an-dapa i Andry Rajoelina rehefa nahavita ny iraka nampanaovina azy ny Raiamandreny Mijoro fa tsy hiandry ny SADC kanefa izao dia nanambara fa hiandry ihany.
Nanaovan’ity mpitarika ny MFM Analamanga ity fanamarihana koa ireo kabarin’ny filohan’ny FAT, izay tsy mba manisy resaka ny andrasan’izy tenany fa resabe fotsiny. Im-piry nilaza fifidianana moa i Andry Rajoelina, nefa izao toa sonia indray, hoy hatrany i Constant. “Ataovy ny sonianareo mianakavy fa raha vao tsy ilay notapahan’ny filoham-pirenena eny anivon’ny SADC dia aleo tsitsiana ny ranomainty”, hoy izy. “Tsy misy resenareo lahatra eto fa na ny vato aza efa malama tamin’ny nipetrahanay teto, lefinay na ny masoandro na ny orana na ny hafanana na ny hatsiaka. Ianareo no resy lahatra fa ny anay no marina ary mahatsapa izany ihany koa ny namanareo. Efa nidaboka ny fifidianana, fotoanan’ny fananganana fanjakana tena izy izao”, hoy hatrany Raveloson Constant nanohy ny teniny, ary anontanio ny Seces, ny mpianatra, ny FRAM, ny Paramed, ny ladoany…raha mahazaka fitondrana ny FAT. Ny hery tsy mahaleo ny fanahy.
Maka bahana kely isika rahampitso zoma (anio), manentana faramparany an’ireo mbola variana any rehetra any fa ho fenointsika amin’izay ity kianja ity manomboka sabotsy ary hihetsika isika. “Mandritra ny fandalovan’ny iraky ny Troika eto dia aleo hifanome tanana isika eto an-kianja ary manàna finoana fa tsy maintsy mandresy isika !”, hoy i Zafilahy Stanislas nanamafy izany.